C/wali Gaas “Puntland uma baahno Ciidamo AMISOM, waxay heysataa….” | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » C/wali Gaas “Puntland uma baahno Ciidamo AMISOM, waxay heysataa….”
C/wali Gaas ayaa albaabada u furay caawinaad ay ka helaan dowladda Dhexe iyo Ciidamada AMISOM ee ka socda Midowga Afrika, si ay u xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaabka saldhiga ku leh Buuraha Galgala.
Ciidamada AMISOM ayaa waajibaadkooda aheyn inay ka howl galaan deegaanada Puntland, hase haatee Madaxweyne Gaas ayaa sheegaya in taageeradii ay xaqa u lahaayeen aanay ka helin, isla markaana ay tani muujineyso cadaalad darro, maadaama kaliya ay caawiyaan Ciidamada dowladda ee ku sugan Gobollada Koofureed.
“Uma baahni ciidamada AMISOM, ciidamada Puntland waxay leeyihiin awood ay kula dagaalamaan Al-Shabaab, Laakiin waxaa u baahanahay in nalagu caawiyo qalab milateri, isgaarsiinta, gaadiidka, hub iyo rasaas”ayuu u sheegay Madaxweyne C/wali Gaas oo la hadlayay Wakaalada wararka ee Reuters.
“Taageeradani waa waxa aan u baahanahay, ee aan xaqa u laheyn, inaan helno waxyaabahan oo dhan, maxaa Ciidamada Muqdisho u caawiyay iyo Maxaa Ciidamada Puntland u caawin weyday? tani waxay muujineysaa cadaalad darada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya”ayuu si kulul u yiri Madaxweyne Gaas.
« (DHAGEYSO) BcIyaaraha Ee Radio Maanta 02-08-2015
Shirkii caadigaa ee Golaha Wasiirada oo looga hadlay arrimo dhowr ah (Sawirro) »